မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲမတိုငျခငျ နညျးဗြူဟာပိုငျးဆိုငျရာ သုံးသပျကွညျ့ခွငျး
ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ပွိုငျဆိုငျမှုအပွငျးထနျဆုံးနဲ့ ပရိသတျစှဲဝငျစားမှုအမြားဆုံး ပှဲစဉျတဈပှဲဖွဈတဲ့ မနျစီးတီးနဲ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျတို့ရဲ့ မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲက အခုည မွနျမာစံတျောခြိနျ (၁၁:၀၀)နာရီအခြိနျမှာ ယှဉျပွိုငျကစားကွမှာပါ။
ပရီးမီးယားလိဂျမှာ (၁၅)ပှဲဆကျ အနိုငျ၊ ပွိုငျပှဲစုံမှာ (၂၁)ပှဲဆကျအနိုငျမှတျတမျးအပွငျ နောကျဆုံး(၂၈)ပှဲဆကျရှုံးပှဲမရှိခဲ့တဲ့ မနျစီးတီးအသငျးကို ပရီးမီးယားလိဂျအဝေးကှငျး (၂၁)ပှဲဆကျရှုံးပှဲမရှိတဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျး ဘယျလိုရငျဆိုငျမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။
ဒီနှဈအစပိုငျးတုနျးက ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဆုအတှကျ ဒီနှဈသငျးအပွိုငျအဆိုငျးဖွဈခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျးပှဲတှမှော ယူနိုကျတကျအသငျး ရလဒျတှကေဆြငျးလာတာနဲ့အတူ မနျစီးတီးအသငျးကလညျး နိုငျပှဲတှဆေကျတိုကျရယူနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ လကျရှိအခြိနျမှာ ဒီနှဈသငျးကွား အမှတျကှာဟာမှုက (၁၄)မှတျအထိရှိနပေါပွီ။
မနကေ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ လကျစတာအသငျးက အနိုငျရခဲ့တာကွောငျ့ ယူနိုကျတကျတို့ အဆငျ့(၂)နရောကို လှဲပွောငျးပေးခဲ့ရလို့ အခုပှဲက ခနျြပီယံဆုအတှကျ အဆုံးအဖွတျဆိုတာထကျ ယူနိုကျတကျအသငျး အဆငျ့(၂)နရော ပွနျရောကျဖို့ပဲ အာရုံစိုကျရတော့မှာပါ။ အဲဒါကွောငျ့ ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျလရှေိ့တဲ့ မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲမတိုငျခငျ ဒီနှဈသငျး ဘယျလိုနညျးဗြူဟာတှနေဲ့ ပှဲထှကျလာမလဲဆိုတာ သုံးသပျကွညျ့ခငျြပါတယျ . . .
အခုနောကျပိုငျးပှဲတှမှော Total Football ဆနျဆနျ ကစားနတေဲ့ မနျစီးတီးအသငျးနညျးပွ ဂှါဒီယိုလာကတော့ ပှဲထှကျလူစာရငျးကို ကွီးကွီးမားမားပွောငျးလဲဖို့ မရှိဘဲ နောကျဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ဝုလျဗျနဲ့ပှဲက ပုံစံအတိုငျး အသုံးပွုဖို့ရှိပါတယျ။ ဝျေါလျကာနဲ့ ကနျဆယျလိုတို့ဟာ Wing Backs ပုံစံနဲ့ ကစားဖို့ရှိသလို ဝျေါလျကာဟာ သူ့ရဲ့ လငျြမွနျမှု၊ ခန်ဓာကိုယျကွံ့ခိုငျမှုတို့ကို အသုံးပွုပွီး ယူနိုကျတကျ ဘယျခွမျးတိုကျစဈက ရပျရျှဖို့ဒျကို ထိနျးခြုပျဖို့ကွိုးစားပါလိမျ့မယျ။
မနျစီးတီးကို စရောကျကတညျးက ခွစှေမျးကောငျးတှပွေနတေဲ့ နောကျခံလူဒီယကျဈကို လာပေ့ါတျ ဒါမှမဟုတျ ဂြှနျစတုနျးဈတို့နဲ့ တှဲဖကျကစားဖို့ရှိနပွေီး သူတို့ရဲ့အဓိကတာဝနျက အထောငျတိုကျစဈမှူးအဖွဈ ပှဲထှကျလာနိုငျတဲ့ ကာဗာနီကို ထိနျးခြုပျဖို့ပါပဲ။ ယူနိုကျတကျကှငျးလယျအသကျသှေးကွောဖွဈတဲ့ ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈကို တားဆီးဖို့အတှကျ ရိုဒရီဟာ Deep Lying Midfielder အဖွဈ ကစားသှားဖို့ရှိပွီး သူ့တာဝနျက တိုကျစဈကိုလိုကျပါဖို့ထကျ ခံစဈကို ကူညီပေးဖို့ အဓိကဖွဈပါလိမျ့မယျ။
အခုနောကျပိုငျး ဂှါဒီယိုလာက ဂိုးရဖို့အတှကျ တိုကျစဈကစားသမားတှကေိုပဲ အဓိကတာဝနျမယူခိုငျးဘဲ ကှငျးလယျက ဂမျဒိုဂနျ၊ ဘာနာဒိုဆေးလျဗားတို့ကိုပါ တာဝနျပေးထားသလိုဖွဈနပွေီး ဂမျဒိုဂနျဟာ တိုကျစဈကစားသမားတှကေို ပွိုငျဘကျခံစဈက အာရုံစိုကျနခြေိနျမှာ လှတျသှားတဲ့ လမျးကွောငျးတှကေနေ ဂိုးသှငျးလရှေိ့တာကွောငျ့ ယူနိုကျတကျခံစဈ အလုပျရှုပျမယျ့အနအေထားပါပဲ။
ဒ့ါအပွငျ ဂှါဒီယိုလာဟာ တိုကျစဈမှာ နရောစုံရှပွေ့ောငျးကစားစဖေို့အတှကျ ဂြေးဆုထကျ ဖိုဒနျကို ပှဲထှကျစဖေို့ရှိပွီး စတာလငျ၊ ဖိုဒနျ၊ မာရကျဇျ အတှဲအဖကျကို အသုံးပွုဖို့ရှိပါတယျ။ ကှငျးလယျဗိုလျခြုပျ ဒီဘရိုငျးနားကတော့ တိုကျစဈကို အလှနျအကြှံလိုကျဖို့ထကျ တိုကျစဈကစားသမားတှအေတှကျ တိကတြဲ့ဂိုးဖနျတီးမှုတှေ ပွုလုပျသှားဖို့မြားပါတယျ။
ယူနိုကျတကျဂိုးသမား ဒီဂီယာဟာ ဇနီးဖွဈသူ မီးဖှားနတောကွောငျ့ စပိနျကို ပွနျသှားတဲ့အတှကျ ဒီပှဲကို လှဲခြျောမှာဖွဈပွီး ပေါ့ဘာလညျး မပါနိုငျတဲ့အပွငျ နောကျခံလူ လငျဒီလော့ဖျဟာ နောကျကြောဒဏျရာကွောငျ့ ပါဝငျကစားဖို့ မသခြောသေးပါဘူး။ ဒီပှဲအတှကျ ယူနိုကျတကျပှဲထှကျလူစာရငျးက ပွီးခဲ့တဲ့ပဲလစျေ့နဲ့ပှဲကလူစာရငျးနဲ့ အမြားကွီးကှာခွားဖို့မရှိဘဲ ဂိုးသမားအဖွဈ ဟနျဒါဆနျ၊ နောကျတနျးမှာ ဘာယီနဲ့ မကျဂှိုငျးယားကို တှဲသုံးဖို့ရှိနပေါတယျ။
ကှငျးလယျမှာ မာတဈထကျစာရငျ တိုကျစဈလိုကျပါမှု ပိုကောငျးတဲ့ တှမျမီနေးကို ဖရကျဒျနဲ့တှဲပွီး Double Pivot အဖွဈ အသုံးပွုသှားမယျ့အနအေထားပါပဲ။ အဓိကအခကျြကတော့ ပှဲကွီးတှဆေိုရငျ ခွစှေမျးမပွနိုငျတဲ့အပွငျ အခုနောကျပိုငျး ပှဲပနျးနပေုံပျေါတဲ့ အဓိက ကစားသမား ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈ ခွစှေမျးပွနိုငျဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။
တိုကျစဈမှာတော့ ကွံ့ခိုငျမှုရာနှုနျးပွညျ့မရှိတဲ့ မာစီယဲလျထကျ ဝါရငျ့တိုကျစဈမှူး ကာဗာနီ ပှဲထှကျလာဖို့ရှိပွီး ရပျရျှဖို့ဒျက ဘယျခွမျးတိုကျစဈ၊ လငျြမွနျတဲ့ Counter Attacking စတငျနိုငျဖို့ နောကျပိုငျးပှဲတှမှော ခွစှေမျးပွနတေဲ့ ဒနျနီယဲလျဂြိမျးဈတို့ တှဲဖကျကစားဖို့ရှိနပေါတယျ။ တကယျလို့ ဆိုးလျရှားသာ ပုံမှနျအသုံးပွုနကြေ (၄-၂-၃-၁)အစား၊ (၃-၅-၂)နဲ့ ပှဲထှကျလာမယျဆိုရငျတော့ တိုကျစဈမှာ ရပျရျှဖို့ဒျနဲ့ ကာဗာနီ၊ ဘရူနိုက False9ပုံစံပွောငျးကစားပါလိမျ့မယျ။
ဆိုးလျရှားလကျထကျမှာ ယူနိုကျတကျအသငျး မနျစီးတီးနဲ့ပွိုငျပှဲစုံ (၇)ပှဲဆုံတှခေဲ့ပွီး (၃)ပှဲနိုငျ၊ (၁)ပှဲသရေ၊ (၃)ပှဲရှုံးနိမျ့ခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျမှာတော့ အခုနောကျပိုငျးမှာ ယူနိုကျတကျအသငျး အသာရသလိုရှိပွီး မနှဈက အိမျကှငျး၊ အဝေးကှငျးနှဈကြော့စလုံး အနိုငျကစားနိုငျခဲ့တယျ။ တဈခုရှိတာက ဆိုးလျရှားဟာ Predictabel Manager ဖွဈလို့ သူ ဘာလုပျမလဲဆိုတာ ဂှါဒီယိုလာ ကောငျးကောငျးသဘောပေါကျနိုငျတာပါပဲ။
ဒီနှဈအသငျး လကျရှိအနအေထားအရ မနျစီးတီးက အသာရနတေယျဆိုပမေယျ့ ယူနိုကျတကျအသငျးကလညျး အဝေးကှငျးမှာ ပိုရလဒျကောငျးလရှေိ့တာကွောငျ့ ဘယျလိုရလဒျထှကျပျေါလာမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပဲဖွဈပါတော့တယျ . . .
မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲမတိုင်ခင် နည်းဗျူဟာပိုင်းဆိုင်ရာ သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ ပရိသတ်စွဲဝင်စားမှုအများဆုံး ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ မန်စီးတီးနဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ရဲ့ မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲက အခုည မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၁:၀၀)နာရီအချိန်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမှာပါ။ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ (၁၅)ပွဲဆက် အနိုင်၊ ပြိုင်ပွဲစုံမှာ (၂၁)ပွဲဆက်အနိုင်မှတ်တမ်းအပြင် နောက်ဆုံး(၂၈)ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးအသင်းကို ပရီးမီးယားလိဂ်အဝေးကွင်း (၂၁)ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိတဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်း ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ဒီနှစ်အစပိုင်းတုန်းက ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုအတွက် ဒီနှစ်သင်းအပြိုင်အဆိုင်းဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ ယူနိုက်တက်အသင်း ရလဒ်တွေကျဆင်းလာတာနဲ့အတူ မန်စီးတီးအသင်းကလည်း နိုင်ပွဲတွေဆက်တိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့် လက်ရှိအချိန်မှာ ဒီနှစ်သင်းကြား အမှတ်ကွာဟာမှုက (၁၄)မှတ်အထိရှိနေပါပြီ။ မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ လက်စတာအသင်းက အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် ယူနိုက်တက်တို့ အဆင့်(၂)နေရာကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရလို့ အခုပွဲက ချန်ပီယံဆုအတွက် အဆုံးအဖြတ်ဆိုတာထက် ယူနိုက်တက်အသင်း အဆင့်(၂)နေရာ ပြန်ရောက်ဖို့ပဲ အာရုံစိုက်ရတော့မှာပါ။ အဲဒါကြောင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လေ့ရှိတဲ့ မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲမတိုင်ခင် ဒီနှစ်သင်း ဘယ်လိုနည်းဗျူဟာတွေနဲ့ ပွဲထွက်လာမလဲဆိုတာ သုံးသပ်ကြည့်ချင်ပါတယ် . . .
အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ Total Football ဆန်ဆန် ကစားနေတဲ့ မန်စီးတီးအသင်းနည်းပြ ဂွါဒီယိုလာကတော့ ပွဲထွက်လူစာရင်းကို ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲဖို့ မရှိဘဲ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ဝုလ်ဗ်နဲ့ပွဲက ပုံစံအတိုင်း အသုံးပြုဖို့ရှိပါတယ်။ ဝေါ်လ်ကာနဲ့ ကန်ဆယ်လိုတို့ဟာ Wing Backs ပုံစံနဲ့ ကစားဖို့ရှိသလို ဝေါ်လ်ကာဟာ သူ့ရဲ့ လျင်မြန်မှု၊ ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုတို့ကို အသုံးပြုပြီး ယူနိုက်တက် ဘယ်ခြမ်းတိုက်စစ်က ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ မန်စီးတီးကို စရောက်ကတည်းက ခြေစွမ်းကောင်းတွေပြနေတဲ့ နောက်ခံလူဒီယက်စ်ကို လာပေ့ါတ် ဒါမှမဟုတ် ဂျွန်စတုန်းစ်တို့နဲ့ တွဲဖက်ကစားဖို့ရှိနေပြီး သူတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်က အထောင်တိုက်စစ်မှူးအဖြစ် ပွဲထွက်လာနိုင်တဲ့ ကာဗာနီကို ထိန်းချုပ်ဖို့ပါပဲ။ ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကို တားဆီးဖို့အတွက် ရိုဒရီဟာ Deep Lying Midfielder အဖြစ် ကစားသွားဖို့ရှိပြီး သူ့တာဝန်က တိုက်စစ်ကိုလိုက်ပါဖို့ထက် ခံစစ်ကို ကူညီပေးဖို့ အဓိကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ဂွါဒီယိုလာက ဂိုးရဖို့အတွက် တိုက်စစ်ကစားသမားတွေကိုပဲ အဓိကတာဝန်မယူခိုင်းဘဲ ကွင်းလယ်က ဂမ်ဒိုဂန်၊ ဘာနာဒိုဆေးလ်ဗားတို့ကိုပါ တာဝန်ပေးထားသလိုဖြစ်နေပြီး ဂမ်ဒိုဂန်ဟာ တိုက်စစ်ကစားသမားတွေကို ပြိုင်ဘက်ခံစစ်က အာရုံစိုက်နေချိန်မှာ လွတ်သွားတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကနေ ဂိုးသွင်းလေ့ရှိတာကြောင့် ယူနိုက်တက်ခံစစ် အလုပ်ရှုပ်မယ့်အနေအထားပါပဲ။ ဒ့ါအပြင် ဂွါဒီယိုလာဟာ တိုက်စစ်မှာ နေရာစုံရွှေ့ပြောင်းကစားစေဖို့အတွက် ဂျေးဆုထက် ဖိုဒန်ကို ပွဲထွက်စေဖို့ရှိပြီး စတာလင်၊ ဖိုဒန်၊ မာရက်ဇ် အတွဲအဖက်ကို အသုံးပြုဖို့ရှိပါတယ်။ ကွင်းလယ်ဗိုလ်ချုပ် ဒီဘရိုင်းနားကတော့ တိုက်စစ်ကို အလွန်အကျွံလိုက်ဖို့ထက် တိုက်စစ်ကစားသမားတွေအတွက် တိကျတဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုတွေ ပြုလုပ်သွားဖို့များပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ဂိုးသမား ဒီဂီယာဟာ ဇနီးဖြစ်သူ မီးဖွားနေတာကြောင့် စပိန်ကို ပြန်သွားတဲ့အတွက် ဒီပွဲကို လွဲချော်မှာဖြစ်ပြီး ပေါ့ဘာလည်း မပါနိုင်တဲ့အပြင် နောက်ခံလူ လင်ဒီလော့ဖ်ဟာ နောက်ကျောဒဏ်ရာကြောင့် ပါဝင်ကစားဖို့ မသေချာသေးပါဘူး။ ဒီပွဲအတွက် ယူနိုက်တက်ပွဲထွက်လူစာရင်းက ပြီးခဲ့တဲ့ပဲလေ့စ်နဲ့ပွဲကလူစာရင်းနဲ့ အများကြီးကွာခြားဖို့မရှိဘဲ ဂိုးသမားအဖြစ် ဟန်ဒါဆန်၊ နောက်တန်းမှာ ဘာယီနဲ့ မက်ဂွိုင်းယားကို တွဲသုံးဖို့ရှိနေပါတယ်။ ကွင်းလယ်မှာ မာတစ်ထက်စာရင် တိုက်စစ်လိုက်ပါမှု ပိုကောင်းတဲ့ တွမ်မီနေးကို ဖရက်ဒ်နဲ့တွဲပြီး Double Pivot အဖြစ် အသုံးပြုသွားမယ့်အနေအထားပါပဲ။ အဓိကအချက်ကတော့ ပွဲကြီးတွေဆိုရင် ခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့အပြင် အခုနောက်ပိုင်း ပွဲပန်းနေပုံပေါ်တဲ့ အဓိက ကစားသမား ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ် ခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်စစ်မှာတော့ ကြံ့ခိုင်မှုရာနှုန်းပြည့်မရှိတဲ့ မာစီယဲလ်ထက် ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူး ကာဗာနီ ပွဲထွက်လာဖို့ရှိပြီး ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်က ဘယ်ခြမ်းတိုက်စစ်၊ လျင်မြန်တဲ့ Counter Attacking စတင်နိုင်ဖို့ နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ဒန်နီယဲလ်ဂျိမ်းစ်တို့ တွဲဖက်ကစားဖို့ရှိနေပါတယ်။ တကယ်လို့ ဆိုးလ်ရှားသာ ပုံမှန်အသုံးပြုနေကျ (၄-၂-၃-၁)အစား၊ (၃-၅-၂)နဲ့ ပွဲထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ တိုက်စစ်မှာ ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်နဲ့ ကာဗာနီ၊ ဘရူနိုက False9ပုံစံပြောင်းကစားပါလိမ့်မယ်။
ဆိုးလ်ရှားလက်ထက်မှာ ယူနိုက်တက်အသင်း မန်စီးတီးနဲ့ပြိုင်ပွဲစုံ (၇)ပွဲဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး (၃)ပွဲနိုင်၊ (၁)ပွဲသရေ၊ (၃)ပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ယူနိုက်တက်အသင်း အသာရသလိုရှိပြီး မနှစ်က အိမ်ကွင်း၊ အဝေးကွင်းနှစ်ကျော့စလုံး အနိုင်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ တစ်ခုရှိတာက ဆိုးလ်ရှားဟာ Predictabel Manager ဖြစ်လို့ သူ ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ ဂွါဒီယိုလာ ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နိုင်တာပါပဲ။ ဒီနှစ်အသင်း လက်ရှိအနေအထားအရ မန်စီးတီးက အသာရနေတယ်ဆိုပေမယ့် ယူနိုက်တက်အသင်းကလည်း အဝေးကွင်းမှာ ပိုရလဒ်ကောင်းလေ့ရှိတာကြောင့် ဘယ်လိုရလဒ်ထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပဲဖြစ်ပါတော့တယ် . ..
ဆိုးလျရှား စှနျ့စားသုံးရမယျ့ ကစားသမားက ဒီယာလိုလား